Inqubomgomo Yemfihlo - Goldenlaser
Umshini wokusika we-Laser we-Flatbed
Umshini we-CO2 Galvo Laser
Umshini Wokusika we-Laser Laser
I-Digital Laser Die Cutter yelebula
CO2 Laser umsiki Engraver
Amapayipi Wokuphefumula Wezindwangu
Ilebula, Yesigcilikisha, Tape Ekhombisa
Ama-Discs e-Sandpaper Sanding
Inayiloni, iPolyamide (PA)
Ifilimu Yokudlulisa Ekhombisa
Itheyiphu ye-3M VHB
Mayelana neGolden Laser (PDF)
IGolden Laser izohlonipha futhi ivikele ubumfihlo bakho. Sizovikela noma yiluphi ulwazi olunikezayo lapho uvakashela le webhusayithi.
01) Ukuqoqwa kolwazi
Kule webhusayithi, ungajabulela noma iyiphi insizakalo enikeziwe, njengokubeka i-oda, ukuthola usizo, ukulanda amafayela nemisebenzi ebambe iqhaza. Ngaphambi kokuba ukwenze lokho, kudingeka ukuthi ugcwalise imininingwane yakho yomuntu siqu esingakunikeza ngayo ukukhetha okufanelekile futhi sikukhulule umklomelo kuwe uma kukhona.
Sithuthukisa ngokungafanele isevisi yethu nemikhiqizo (kufaka phakathi ukubhaliswa) ukuhlangabezana nezidingo zakho. Uma kungenzeka, sizodinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nenkampani yakho, ulwazi kumikhiqizo yethu nangendlela yokuxhumana.
02) Ukusetshenziswa Kwemininingwane
Yonke imininingwane yakho kule web izovikelwa ngokuqinile. Ngu info, Golden Laser wethu ngeke ukukhokhela isevisi yakho kangcono futhi ngokushesha. Kwezinye izimo, singakwazisa ngocwaningo lwakho lwakamuva lwemakethe nolwazi lomkhiqizo.
03) Ukulawulwa Kwemininingwane
Sinesibopho esisemthethweni sokuvikela noma yiluphi ulwazi esiluqoqa kuwe, kufaka phakathi impendulo noma ezinye izindlela. Lokho kusho ukuthi ngaphandle kweGolden Laser akekho umuntu wesithathu ozojabulela imininingwane yakho.
Ngokuhlanganisa imininingwane yakho kusuka kuwebhu nokuhlanganisa idatha evela eceleni, sizokuncoma ngemikhiqizo nensizakalo engcono kakhulu.
Qaphela: Ezinye izixhumanisi kule webhusayithi, zikusiza kalula nje futhi zizokukhipha kule webhusayithi, okusho ukuthi iGolden Laser yethu ngeke ithathe noma yimuphi umthwalo wemisebenzi yakho nolwazi kwamanye amawebhusayithi. Ngakho-ke noma yimaphi amanothi mayelana nezixhumanisi eziya engxenyeni yesithathu yewebhu azobe engaphezulu kwalo mbhalo wobumfihlo.
I-04) Ukuphepha Kwemininingwane
Sihlele ukuvikela imininingwane yakho ephelele, sigweme ukulahleka, ukusebenzisa kabi, ukuvakashelwa okungagunyaziwe, ukuvuza, udlame nokuphazamisa. Yonke idatha ekuseva yethu ivikelwe nge-firewall, ne-password.
Siyajabula ukuhlela imininingwane yakho uma udinga. Ngemuva kokuguqulwa, sizokuthumela imininingwane efanele nge-imeyili ukuze uyihlole.
05) Ukusetshenziswa Kwamakhukhi
Amakhukhi ayizicucu zedatha ezakhiwa lapho uvakashela iwebhusayithi yethu futhi ezigcinwe enkombeni yamakhukhi kukhompyutha yakho. Azisoze zachitha noma zifunde idatha kwikhompyutha yakho. Amakhukhi abamba ngekhanda iphasiwedi yakho bese upheqa isici esizosheshisela ukusefa kwakho kuwebhu yethu ngesikhathi esizayo. Futhi ungawenqaba amakhukhi uma ungafuni.
06) Memezela ukuhunyushwa
kokuguqulwa kwalesi sitatimende nokusetshenziswa kwewebhusayithi kungokwakwaGolden Laser. Uma ngabe le nqubomgomo yobumfihlo iguquka nganoma iyiphi indlela, sizobeka inguqulo ebuyekeziwe kuleli khasi futhi sinikeze nosuku onyaweni waleli khasi. Uma kunesidingo, sizofaka uphawu olwenzekayo kuwebhu ukukwazisa.
Noma iziphi izingxabano ezibangelwe yilesi sitatimende noma ukusetshenziswa kwewebhusayithi zizothobela umthetho ofanayo wePeople's Republic of China.
I-Flatbed Laser Cutter
Encane CO2 Laser umsiki
Ukubuka konke kwe-Laser Machines
Izinto Zokucutshungulwa ze-Laser
I-Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
map-marker IGoldenlaser Industrial Park, iTianxing Road, iChuanlong Avenue, isifunda saseHuangpi, iWuhan, iHubei, China
Copyright © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.